Calaamadeynta qaybta - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Calaamadeynta qaybta waa hab kharash-ku-ool ah oo lagu daro astaamo ama xaraf u gaar ah naqshadahaaga waxaana badanaa loo isticmaalaa calaamadeynta qayb ka mid ah caadada inta lagu jiro wax soo saarka buuxa.
● Codso qaybaha elektarooniga ah, wareegyada isku dhafan (IC), qalabka korontada, isgaarsiinta mobilada, alaabada qalabka, qalabka qalabka, qalabka saxda ah, muraayadaha iyo saacadaha, dahabka, qalabka baabuurta, badhanka balaastigga, qalabka dhismaha, Tuubooyinka PVC, qalabka caafimaadka iyo warshadaha kale. .
Materials Qalabka la adeegsan karo waxaa ka mid ah: Biraha guud iyo kuwa laysku daro (birta, naxaasta, aluminium, magnesium, zinc iyo macdano kale), biro dhif ah iyo aalado (dahab, qalin, titanium), biraha oksaydhka (dhammaan noocyada oksida biraha waa la aqbali karaa) daaweynta (fosfinta, aluminium anodization, dusha electroplating), wax ABS (guryaha qalabka korontada, baahiyaha maalinlaha ah), khad (furayaasha hufan, waxyaabaha daabacan), cusbi epoxy (baakadaha qayb elektaroonig ah, lakabka dahaarka).
Calaamadeynta alaabta waxaa ka mid ah calaamadeynta leysarka iyo xardho cnc.
Calaamadeynta laser-ka waa hab calaamadeyn ah oo adeegsada leysarka cufnaanta sare leh si deegaanka looga nadiifiyo qalabka shaqada si uu u uumi uumiyo maaddada dusha sare ama uu u soo saaro falcelin kiimikaad oo midab beddel ah, sidaasna ku reebaysa calaamado joogto ah.
Principle Mabda'a aasaasiga ah ee calaamadeynta leysarka ayaa ah in ley laser-tamar sare leh oo joogto ah ay soo saaraan koronto-dhaliye leysar, laser-ka diirada saareyna wuxuu ku dhaqmaa wax daabacaada si dhakhso leh ayuu u dhalaaliyaa ama xitaa uumiga maadada dusha sare. Adoo xakameynaya wadada leysarka dusha sare ee maaddada, Samee calaamadaha garaafka ee loo baahan yahay.
Calaamadeynta Laser waxaa lagu gartaa farsameyn aan xiriir aheyn, oo lagu calaamadeyn karo dusha qaab kasta oo qaab gaar ah leh, qalabka shaqaduna ma xumaan doono oo ma abuuri doono walaac gudaha ah. Waxay ku habboon tahay calaamadeynta birta, caagagga, dhalada, dhoobada, qoryaha, maqaarka iyo qalabka kale.
● Laser ayaa calaamadeyn kara ku dhowaad dhammaan qeybaha (sida bistooladaha, giraanta bistooladaha, filtarka, kuraasta waalka, aaladaha qalabka, qalabka nadaafadda, qalabka elektarooniga ah, iwm.), Calaamaduhuna waa kuwo duug u adkaysta, habka wax soo saarku waa fududahay in otomatig laga dhigo, iyo qaybaha la calaamadeeyay waxay leeyihiin cillad yar.
● Waxay ku habboon tahay jarista, xardho laba-geesood ah iyo xardho saddex-geesood ah oo ku saabsan alaab guri oo kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, shaqooyinka iyo faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee mashiinka xardho astaamaha birta badan: awood badan, ujeedooyin badan, ha ahaato sameynta naxaas, bir bir ah, titanium, aluminium iyo warqado kale oo dusha sare ah, qaabab xardhan iyo farshaxan farshaxan farshaxanno fiican leh. , iwm ha la dhammeeyo. Sababtoo ah shaqada xardho ee xoogga leh iyo dahaadhida mashiinkan, qaybta shaqada ayaa laga baaraandegi karaa calaamadaha waaweyn ee qaabab u leh naasa-gashiga yar yar iyo magac-yaallay.
● Xardho CNC waa isku-dar ah qodista iyo axdi qarameed marka la eego mabda'a processing. Xulashada saxda ah ee walxaha xardhan CNC iyo isticmaalka macquulka ah ee tikniyoolajiyadda waxay noqon kartaa mashruuc leh soo-celin sare oo maalgashi. Maaddaama walxaha xardhan ee CNC ay ku sifoobeen qaabab isku dhafan, qaabab gaar ah, iyo alaabooyin dhammaystiran oo ganaax ah, halka mashiinnada xardhan ee CNC ay yihiin qaabab miisaanka fudud, tan runti waxay xaddideysaa qaabka shaqada ee xardhadda CNC sida: "si dhakhso leh wax loogu shiisho qalab yar". Xaqiiqdii, tani sidoo kale waa "faa'iidada xirfadeed" ee xardhadda CNC, sababtuna waxay tahay in xardhadda CNC ay sameyneyso "ganacsi aan lagu shaqeyn karin aalado waaweyn oo caadi ah". Sababtoo ah faa'iidooyinka xirfadeed ee gaarka ah ee xardhadda CNC, xardhashada GNC ayaa aad ugu habboon warshadaha soo socda: warshadaha xardho caaryada iyo warshadaha xardho xayeysiinta.